China HRC65 Carbide 2 Flute Micro End Mill mpanamboatra sy mpamatsy | Mingtaishun
Ny orinasanay dia mitazona ny toe-tsaina "fanavaozana, firindrana, fiaraha-miasa sy fizarana, lalana, fandrosoana pragmatika". Omeo fotoana izahay hanaporofoana ny fahaizanay. Miaraka amin'ny fanampianao tsara dia mino izahay fa afaka mamorona ho avy mamirapiratra miaraka aminao izahay.
Hatramin'ny nananganana ny orinasanay dia takatray ny maha-zava-dehibe ny fanomezana vokatra tsara kalitao sy ny serivisy tsara alohan'ny varotra sy aorian'ny fivarotana. Ny ankamaroan'ny olana eo amin'ny mpamatsy sy mpanjifa manerantany dia vokatry ny tsy fahampian'ny serasera. Ara-kolontsaina, ny mpamatsy dia mety tsy sahy manontany zavatra tsy azony. Izahay dia mamaky ireo sakana ireo mba hahazoana antoka fa tonga amin'izay tadiavinao amin'ny ambaratonga antenainao ianao rehefa tianao izany.
Manana traikefa ampy amin'ny famokarana vokatra arakaraka ny santionany na sary. Raisinay tsara ireo mpanjifa avy any ivelany sy any ivelany hitsidika ny orinasanay, ary hiara-hiasa aminay hiaraka ho avy mahafinaritra.
Fitaovana mivaingana: Ampiasao ny GU25UF miaraka amin'ny atiny 10% Co sy ny haben'ny voam-bary 0.6um.
Fitaovana: AlTiSiN, miaraka amin'ny hamafin'ny faritra avo sy fanoherana tsara, ny AlTiSiN dia azo apetraka ihany koa Application: be mpampiasa amin'ny faritra Machining, aerospaee, fiara ary faritra mpamokatra hafa.
Diameter D Halava manapaka Lc Diameter Shank d Halava ankapobeny L sodina
Y mety Mety
Carbon Steel Firaka vy Cast vy Firaka aluminium Firaka vita amin'ny varahina Inôksa Vy mafy
* Ampiasao ny fitaovana iditra, ny hamafiny ary ny hamafiny avo tsara
* Ampiasao ny teknolojia nano, ny henjana sy ny marin-toerana dia hatramin'ny 4000HV sy 1200 ℃ ，.
* Sodina 2, tsara ho an'ny fanesorana puce, mora amin'ny fanodinana feed vertika, be mpampiasa amin'ny solt sy hole fikirakira
* Mety amin'ny vy karbonika / vy Allpy / vy vy / vy tsy miova / vy mafy
Azafady azafady lesoka 1-5mm noho ny fandrefesana ny tanana.
Ny lokon'ny entana aseho amin'ny sary dia mety hiseho somary samy hafa kely amin'ny monitor'ny solosainao satria tsy mitovy ny kalitaon'ny mpanara-maso.
Manana mpanjifa avy amin'ny firenena 20 mahery izahay ary ny lazantsika dia neken'ny mpanjifanay mendri-kaja. Ny fanatsarana tsy misy farany sy ny fiezahana ho an'ny tsy fahampiana 0% no politikantsika kalitao roa lehibe. Raha mila zavatra ianao, aza misalasala mifandray aminay.
Teo aloha: HRC65 Carbide 4 Flute Roughing End Mill
Manaraka: HRC65 Carbide Standard Length 2F Ball Nose End Mill
3 Fitoeran-tsolika famaranana karbôna
HRC65 Carbide Standard Length 2F Ball Nose End ...